Zvishongedzo uye Anobatsira Makina Vanogadzira | China Chishandiso uye Anobatsira Makina Fekitori & Vatengesi
Mvura Kuchenesa Sisitimu Yekubikira
Mvura mhiri kwenyika inosiyana zvakanyanya uye mvura inozokanganisa pakunaka kwedoro. Kuoma, iyo inoumbwa ne calcium uye magnesium ions inofanirwa kutariswa. Vazhinji vanobika senge mvura ine 50 mg / l yeCalcium, asi yakawandisa inogona kukuvadza zvinwiwa nekuti inoderedza pH yemash. Saizvozvo, Magnesium diki yakanaka, asi yakawandisa inogona kugadzira kuravira kunorwadza. 10 kusvika 25 mg / l yemanganizi inonyanya kudiwa.
Dhizaina Beer Muchina
Dhizaini yedhiraini, zvakare inopereterwa kunyorwa, doro rinoshumirwa kubva kukask kana keg kwete kubva muhombodo kana mugaba. Dhizaini yedhira yakapihwa kubva kune yakamanikidzwa keg inozivikanwa seyeg keg.
Pombi yedoro ivharuvhu, kunyanya pombi, yekudzora kuburitswa kwedoro. Nepo mamwe marudzi epombi anganzi faucet, vharafu kana spigot, kushandiswa kwepombi yedoro kunenge kuri kwese.
Doro Firita Sisitimu
Beer kusefa kuburikidza nekenduru diatomaceous pasi firita ndiyo mhinduro yakajairika yeiyo kusefa mune microbrewery yepakati uye yakakura saizi.
Mhepo compressor system
Pamusoro pekugezesa keg uye kubhodhoro / canning, mhepo compressors zvakare anobatsira maturusi emamwe mabasa akatenderedza doro. Aeration inzira yakakosha mukubika, iyo inosanganisira kuwedzera okisijeni kune mbiriso panguva yekuvira. Yakadzvanywa mweya inoshandiswa zvakare kumagetsi michina panguva yekujekesa maitiro.
Iyi mitsara yedoro yekukweva doro inoshandiswa kuzadza doro mumakani, rinser, filler uye seamer zvakaparadzaniswa unit. Inogona kupedzisa maitiro ese sekuwacha, kuzadza nekuisa chisimbiso.
Steam Generators ndiwo manyuko akakwana emhando yepamusoro akazara chiutsi cheiyo micro-mabheriki, mabhureki uye madiki madhiraini ekubikisa sisitimu.
Malt hwokugaya hwakabvira System
Iyo malt yekugadzirisa sisitimu inosanganisira michina uye zvimwe zvishandiso izvo zvinodiwa kuti zvigadzire malt tsanga usati watanga kugadzirwa kwe wort muimba yekubikira.
Hop Pfuti Sisitimu
"Dry hopping", inonziwo "kutonhora-kusvetuka" mubhizinesi, inzira inoburitswa nemafuta anokosha akakosha kubva kune lupulin iri mumahops mudoro. Dry hopping inoitwa mushure mekuita kwekubika munzvimbo inotonhora. Panguva ino munguva, doro rakapedzwa asi harisati ranyatsoibva.